स्वास्थ्य पूर्वाधारमा फड्को- समाचार - कान्तिपुर समाचार
स्वास्थ्य पूर्वाधारमा फड्को
जनरल बेडसमेत पूर्ण चालु नभएका अस्पतालहरुमा कोरोनाकालमा आईसीयू जडान गरिए जसका कारण आपत्कालीन अवस्थामा हेलिकप्टर चार्टर गरेर ठूला सहर धाउनुपर्ने बाध्यता केही हदसम्म टरेको छ ।
कोरोना संक्रमितको उपचारमा दबाब परेपछि संघीय सरकारले मात्र नभई प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले समेत स्वास्थ्य पूर्वाधारमा उल्लेख्य लगानी गरे । दौडधुप गरेरै जनशक्ति जुटाए ।
फाल्गुन ७, २०७७ मकर श्रेष्ठ
कोरोना भाइरसको उद्गम चीनको वुहानबाट गत वर्ष २०७६ पुस अन्तिम साता धनुषाका एक विद्यार्थी फर्केका थिए । उनलाई कोरोना संक्रमणको आशंका गरियो । तर कोरोना लागेको हो कि होइन भनेर जाँच गर्ने किट नेपालमा थिएन । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले पुस २७ गते उनको स्वाब लियो र परीक्षण गर्न हङकङ पठायो । १२ दिनमा रिपोर्ट आयो ।
कोरोना देखियो । ‘रिपोर्ट कसरी, के लेखेर दिने भन्ने कुनै ढाँचा थिएन,’ प्रयोगशालाका सूचना अधिकारी राजेशकुमार गुप्ताले सुनाए, ‘हातैले लेखेर तपाईंलाई पोजिटिभ भयो भनेर दियौं ।’ ती विद्यार्थी नै नेपालमा भेटिएका पहिलो कोरोना संक्रमित हुन् ।
पहिलो संक्रमितको स्वाब संकलन गर्दा स्वास्थ्यकर्मीले पीपीई त कुरै छाडौं, राम्रो मास्क पनि लगाएका थिएनन् । स्वास्थ्यकर्मीसँग सामान्य सर्जिकल मास्क थियो ।
फ्रान्सबाट फर्केकी काठमाडौंकी एक युवतीलाई चैत १० मा कोरोना पुष्टि भयो । उनको स्वाब भने राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामै परीक्षण गरियो । यो प्रयोगशालाले माघ १३ मा कोरोनाको परीक्षण थालेको थियो । ‘हामीकहाँ पीसीआर मेसिन भए पनि कोरोनाका लागि किट थिएन, किट व्यवस्थापन गरेपछि आफैंले परीक्षण गर्न थाल्यौं,’ प्रयोगशालाकी निर्देशक डा.रुना झाले भनिन् ।
मुलुककै सुविधासम्पन्न यो प्रयोगशालाको एउटा ल्याबमा ६ जना कार्यरत थिए । देशैभरि संकलन गरिएको स्वाब यहीं परीक्षण गर्नुपर्ने भएपछि क्षमता विस्तार गरियो । अहिले यहाँ ५ वटा ल्याब छन् । ल्याबमा कर्मचारीमात्रै १ सय १० जना छन् । कोभिड ल्याबमा ४६ जना कार्यरत छन् । पीसीआर मेसिन २ वटाबाट बढाएर ५ वटा पुर्‍याइएको छ । दिनमा ४० नमुनाको पीसीआर हुने गरेकामा अहिले ३ हजार नमुनाको पीसीआर गर्न सकिन्छ । पहिले कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट पाउन झन्झट थियो । अहिले नमुना दिने व्यक्तिले फोटोसहितको रिपोर्ट तत्कालै पाउन सक्छन् ।
कोरोनाकालमै पीसीआर परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला देशैभरि विस्तार गरियो । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको लगानीमा समेत पीसीआर मेसिन खरिद गरेर परीक्षणको व्यवस्था मिलाइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार अहिले मुलुकभरि ८३ वटा ल्याबमा पीसीआर हुन्छ । यसबीचमा १५ वटा निजी प्रयोगशालाले पीसीआर परीक्षणको व्यवस्था मिलाए । एक वर्षको अवधिमा २१ लाखभन्दा बढी नमुनाको पीसीआर भइसकेको छ । परीक्षणकै क्रममा २ लाख ७२ हजारभन्दा बढीमा कोरोना पोजिटिभ भेटिएको छ ।
कोरोनाकै कारण अस्पतालमा बेड संख्या थपिएका छन् । दुर्गम क्षेत्रबाट गम्भीर बिरामीलाई उपचार गर्न आईसीयू र भेन्टिलेटर अभावमा हेलिकप्टर चार्टर गरेर सुविधासम्पन्न अस्पतालमा लानुपर्ने बाध्यता केही हदसम्म हटेको छ । यसको उदाहरण हो– हुम्लाको जिल्ला अस्पताल । एउटा पनि आईसीयू नभएको यो अस्पतालमा अहिले ५ वटा आईसीयू जडान गरिएको छ । ‘असारयता आईसीयूमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने बिरामीलाई नेपालगन्ज र सुर्खेत पठाउनुपरेको छैन,’ स्वास्थ्य कार्यालय हुम्लाका निमित्त प्रमुख प्रेमबहादुर सिंहले भने । हुम्लाको अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्टसमेत जडान भइसकेको छ । कोरोनाअघि ३ जना विशेषज्ञ चिकित्सक रहेकामा अहिले १० जना छन् । बेड संख्या १५ बाट २५ पुगेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णालीका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक वृषबहादुर शाहीले कोरोनाकै कारण प्रदेशका अस्पताल पर्याप्त जनशक्ति र उपकरणसहित सुविधासम्पन्न भइसकेका बताउँछन् । ‘पहिला सुर्खेत अस्पतालमा मात्रै आईसीयू थियो,’ उनले भने, ‘अहिले कर्णालीका सबैजसो जिल्ला अस्पतालमा आईसीयू र भेन्टिलेटर छन् ।’
सुर्खेत अस्पतालमै पनि कोरोनाकालअघि ४ बेडको आईसीयू थियो । अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर विनोद बस्नेतका अनुसार अहिले आईसीयू बेड संख्या २६ पुगेको छ । भेन्टिलेटर ५ बाट १५ वटा भएको छ । जनरल बेड संख्या १ सय १५ बाट बढेर २ सय भएको छ ।
दैलेख र रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकामा यहीबीचमा पीसीआर मेसिन जडान गरिएको छ । केन्द्र सरकारले पछिल्लो पटक बजेट पठाएअनुसार एचडीयू सुविधाको उपकरण भने जडान हुन बाँकी रहेको बस्नेतले जानकारी दिए ।
प्रदेश १ मा सुविधासम्पन्न सरकारी अस्पतालका रूपमा कोसी अस्पताललाई लिने गरिन्थ्यो । कोरोनाकालको सुरुवातमा प्रदेश १ मा संक्रमितहरूको उपचार धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र कोसी अस्पतालमै गरियो ।
संक्रमितहरूको उपचार सहज नभएपछि प्रदेश सरकारले आफ्नै लगानीमा अस्पताल बनाउने निधो गर्‍यो । कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न कुनै पूर्वाधार नभएको विराटनगरको कोभिड अस्पताल अहिले दुई सय बेडको छ । जहाँ ३० बेडको त आईसीयू नै छ । प्रदेशका अन्य अस्पतालको पनि क्षमता वृद्धि गरिएको छ । मेची अस्पतालमा ४ बेडको मात्रै आईसीयू थियो । अहिले १४ बेडको आईसीयू र २५ बेडको एचडीयू छ । त्यस्तै जिल्ला अस्पताल पाँचथर, धनकुटा र उदयपुरमा समेत १०/१० बेडको आईसीयू जडान गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोनाअघि सेती अस्पतालमा मात्रै आईसीयू रहेकामा अहिले जिल्लास्तरमा पनि विस्तार भइसकेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक नरेन्द्रसिंह कार्कीले बताए । सेतीमा कोरोनाकालअघि ५ बेडका आईसीयू रहेकामा अहिले २० बेड छ । ‘सबै जिल्ला अस्पतालमा २ वटा आईसीयू र भेन्टिलेटरको सामग्री गइसकेको छ । तर जनशक्ति व्यवस्थापन चुनौती भएको छ,’ उनले भने ।
प्रदेश २ मा पनि कोरोना अवधिमा पर्याप्त पूर्वाधार थप भएको सामाजिक मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखाका निर्देशक विजय झाले जानकारी दिए । ‘आईसीयू नै नभएका अस्पतालमा कोरोनाका बेला जडान गरियो,’ उनले भने । काठमाडौं उपत्यकाको अस्पतालमा समेत यही बीचमा पूर्वाधारमा विस्तार भएको छ । टेकुस्थित सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सुरुवा रोग अस्पतालमा २ वटामात्रै आईसीयू रहेकामा अहिले २० बेडको आईसीयूमा संक्रमितको उपचार हुन्छ । ‘कोरोना अवधिमा थपिएका पूर्वाधारले कोरोना नभए पनि अन्य संक्रामक रोग हुँदा गम्भीर रूपमा थलिएका बिरामीको उपचार कहाँ गर्ने भन्ने चिन्ता लिनुनपर्ने भएको छ,’ अस्पतालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारीले भने ।
शिक्षण अस्पताल महारागन्जमा २० बेडबाट आईसीयूलाई ३५ बेड पुर्‍याइएको कोभिड फोकल पर्सन डा. सन्तकुमार दासले जानकारी दिए । एक सय बेडको एचडीयू बनाउने बजेट आएकामा ३० वटा तयार भइसकेको उनले बताए । ‘कोरोनाले क्षति बेहोर्‍यौं तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकास पनि भयो,’ उनले भने, ‘यो पूर्वाधारले बिरामीलाई अकालमा ज्यान जानबाट जोगाउन सघाउनेछ ।’
कीर्तिपुरको आयुर्वेद तालिम तथा अनुसन्धान केन्द्रमा २० बेड थियो । काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमित बढेपछि त्यसको भार कीर्तिपुरले बोक्नुपर्‍यो । त्यसपछि अस्पतालमा बेड संख्या सय पुर्‍याइयो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेलले कोरोना संक्रमितको उपचारलाई सहज बनाउन सरकारले टेकुको सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, पाटन, सशस्त्र प्रहरी अस्पताल, वीर, भक्तपुर र टिचिङमा आईसीयू तथा एचडीयू विस्तार गरेको जानकारी दिए । उपत्यका बाहिर कोसी, गजेन्द्रनारायण (राजविराज), नारायणी (वीरगन्ज), पोखरा, सुर्खेत, डडेलधुरा अस्पतालमा आईसीयू र एचडीयू विस्तार र नयाँ जडान गरिएको उनले बताए । ‘उपकरण जडान भएसँगै जनशक्ति पनि थपिएका छन्,’ उनले भने, ‘कोरोनाका कारण नेपालको स्वास्थ्य पूर्वाधारमा राम्रै लगानी भएको छ । अस्पतालहरू सुविधासम्पन्न भएका छन् ।’
सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न निश्चित अस्पताल छुट्याएको थियो जहाँ उपचार निःशुल्क हुन्थ्यो । बीचमा शुल्क लाग्ने निर्णय ल्याइए पनि विरोधपछि कार्यान्वयन हुन सकेन । टेकुस्थित सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, पाटन अस्पताल र बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी बलको अस्पताललगायत देशभरिका २५ वटा ठूला अस्पताल र ६४ वटा मझौला अस्पताललाई कोभिड अस्पताल तोकिएको थियो । त्यस्तै २३ वटा मेडिकल कलेज र १५ वटा निजी अस्पताललाई समेत कोभिड संक्रमितको उपचारका लागि तोकिएको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार कोरोना उपचारका लागि सबै अस्पतालमा गरेर २० हजार ७ सय ६५ बेड, २ हजार ६ सय आईसीयू र १ सय भेन्टिलेटरको व्यवस्था गरिएको थियो । यो संख्या सरकारी र निजी अस्पतालको हो । मन्त्रालयका अनुसार सुरुवातमा कोरोना संक्रमितका लागि ३ हजार ७६ जनरल बेड र १ हजार ५ सय ९५ आईसीयू बेड र ७ सय ७० भेन्टिलेटर थिए । भेन्टिलेटर, आईसीयू र अक्सिजनको आपूर्ति व्यवस्थापनमा संघीय सरकारले ७० करोड लगानी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
३०९ अस्पताल एकैपटक शिलान्यास कोरोनाकै कारण सरकारलाई स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न थप बाध्यतासमेत परेको छ । त्यसकै एउटा उदाहरण हो– ३ सय ९ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणको सुरुवात । सरकारले गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार अस्पताल नभएका सबै स्थानीय तहमा अस्पताल विस्तार गर्ने घोषणा बजेटमा गरेको थियो ।
जनसंख्या, बिरामीको दर, स्थानीय तहको माग र आवश्यकताका आधारमा ५, १० र १५ बेडको आधारभूत अस्पताल निर्माण सुरु गरिएको हो । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले मंसिर १५ मा ३ सय ९ वटा आधारभूत अस्पताल, ३ वटा सरुवा रोग अस्पताल, एक अस्पतालको आकस्मिक विभागको शिलान्यास गराएका थिए । उनीपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले पनि यो कामलाई प्राथमिकतामा राख्ने उद्घोष गरेका छन् । आधारभूत अस्पताल निर्माण पूरा गर्न ५८ अर्ब बजेट विनियोजनसमेत भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मंसिरमा शिलान्यास भएका अस्पतालहरू दुई वर्षभित्र निर्माण पूरा गरिसक्ने योजना छ । सबै अस्पताल निर्माण भएपछि ४ हजार ८ सय ७५ बेड हुनेछन् । त्यसपछि ९ सय ७५ चिकित्सकसहित ९ हजार ७ सय ६५ स्वास्थ्यकर्मीले रोजगारी पाउनेछन् ।
मन्त्रालयले अस्पताल नभएका ६ सय ४९ स्थानीय तहमा ५ बेडको अस्थायी अस्पताल स्थापना गर्न बजेटसहित कार्यक्रम पठाइसकेको जनाएको छ । मनाङ, मुस्ताङ, हुम्ला, डोल्पा, रुकुम पूर्वका जिल्ला अस्पताललाई २५ बेड र अरू सबै जिल्ला अस्पताललाई ५० बेडमा स्तरोन्नति गरिएका छन् । प्रदेश अस्पताललाई २ सय बेड र संघअन्तर्गतका अस्पताललाई ५ सय बेडमा स्तरवृद्धि गरिएका छन् । स्तरोन्नतिबाट ५ हजार २ सय १ बेड र अस्पताल निर्माणबाट ७ हजार २० बेड गरी १२ हजार २ सय २१ बेड थपिने निश्चित भएको पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री ढकालले बताए ।
सरुवा रोग तथा महामारीजन्य स्वास्थ्य समस्या उपचार गर्न केन्द्रमा ३ सय बेड र हरेक प्रदेशमा ५० बेडको सुविधासम्पन्न प्रयोगशालासहितको सरुवा रोग अस्पताल बन्ने निश्चित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश १ को सुन्दरहरैंचा नगरपालिमा, प्रदेश २ को बारामा र वाग्मतीको भरतपुर अस्पताललाई छुट्टै सरुवा रोग विभाग बनाउने तयारी छ ।
यस्तै, गण्डकीको पोखरा, लुम्बिनी प्रदेशको चन्द्रौटा र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत अस्पतालमा छुट्टै सरुवा रोग विभाग बनाउने र सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटीमा सरुवा रोग अस्पताल बनाउने सरकारको निर्णय छ । सातवटै प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्न ५६ करोड बजेट विनियोजन गरी प्रदेशमा पठाइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७७ १३:१०
महामारीअघि सरूवा रोगका बिरामी राख्ने आइसोलेसन कक्ष थिएन, अहिले ५५ बेडको सुविधासम्पन्न आइसोलेसन कक्ष बनेको छ । दुईवटा भेन्टिलेटरमा चलेको अस्पतालमा १० वटा भेन्टिलेटर छन् । जटिल बिरामी राख्न २० बेडको विशेष आईसीयू कक्ष बनिसकेको छ ।
फाल्गुन ७, २०७७ फातिमा बानु
चिकित्सा पेसामा तीन वर्ष अभ्यास गरेपछि डा. श्रवणकुमार मण्डल सरुवा रोगका बिरामीको उपचारमा मात्रै केन्द्रित हुन खोज्दै थिए । उनी टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा चिकित्सकीय अभ्यास गरिरहेका थिए ।
अभ्यासका हिसाबले सरुवा रोग उनका लागि नयाँ विषय थियो । उनी यसैमा सिक्दै, रम्दै थिए । यत्तिकैमा गत वर्ष (२०७६) मा नयाँ खाले सरुवा रोग अर्थात् कोरोना भाइरस संक्रमणले विश्वव्यापी महामारीको रूप लिन्छ भन्ने हल्ला चल्न थाल्यो ।
संक्रमणजन्य रोगको उपचार अभ्यासमा गर्दै गरेका डा. मण्डललाई कोरोना नामको नयाँ संक्रामक भाइरसको फैलावटले चुनौती थपिदियो । नेपालसम्म यो संक्रमण फैलिन्छ र आफू पनि उपचारमा खटिनैपर्छ भनेर उनी मानसिक रूपमा तयार हुँदै थिए । सरुवा रोगको उपचार गर्ने देशको एक मात्र थलो र रेफरल सेन्टर सरुवा रोग अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा खटिनुपर्ने जिम्मेवारीका कारण पनि उनलाई यो चुनौती स्विकार्नुको विकल्प थिएन । यत्तिकैमा पुस अन्तिम साता चीनको वुहानमा अध्ययनरत ३२ वर्षीय युवा कोरोना संक्रमणको शंकामा अस्पताल भर्ना भए । डा. मण्डललगायत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई ती शंकास्पद व्यक्तिको अवस्था आफ्नै आँखाले देखेपछि संक्रमणको जति डर थियो, त्यो नरहेको उनले बताए ।
पहिलो संक्रमित भेटिनुलाई उनी ‘एक्सिडेन्टल केस’ मान्छन् । त्यतिखेर कोरोना संक्रमित राख्ने खालको विशेष आइसोलेसन कक्ष अस्पतालमा तयार भइसकेको थिएन । कोरोना संक्रमण शंकास्पद कोही भेटियो भने टेकुमा राख्नुपर्छ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो । त्यतिखेर नेपालमा कोरोना संक्रमण पहिचान गर्ने कुनै पूर्वाधार नभएकाले अस्पतालमा भर्ना भएका शंकास्पद व्यक्तिको स्वाब परीक्षणका लागि हङकङ पठाइएको थियो । उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य भएकाले उपचारमा लागिपर्नुपरेको थिएन ।
शंकास्पद व्यक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै पहिचान गरेर टेकु ल्याउने योजना बन्यो । डा. मण्डलले यो कार्यभारको नेतृत्व लिए । ‘हेल्थ डेस्क राखेर हामी विदेशबाट आएका मान्छेको ज्वरो नाप्ने, ट्राभल हिस्ट्री सोधेर लक्षण सोध्ने गर्थ्यौं,’ उनले सुनाए, ‘सुरक्षा सामग्रीको नाउँमा सर्जिकल मास्कमात्रै थियो । रोगको जटिलताबारे थाहा नभएर होला, एयरपोर्टमा संक्रमितसँग पहिलो सम्पर्कमा आउने उच्च सम्भावना हुँदा पनि हामीलाई डर लागेको थिएन ।’ कोरोना संक्रमणको लक्षण भएकी फ्रान्सबाट आएकी एक महिलाको अवस्था देखेपछि भने उनको मनमा डर पस्यो । असारपछि लक्षणसहितका संक्रमित अस्पतालमा थपिन थाले । सम्भावित संक्रमितसँगको सम्पर्कमा आएपछि कुनै पनि बेला आफूभित्र भाइरस छिर्न सक्छ भनेर उनीहरू चिन्तित थिए ।
डा. मण्डल ६ महिनाभन्दा बढी समय अस्पतालमै बसे । कुनै पनि समारोहमा सामेल भएनन् । संक्रमित व्यवस्थापनमा कठिनाइका साथै सर्वसाधारणको रिस, गुनासा र हातपात सहेका छन् यो अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकले । एक वर्षसम्म संक्रमितको उपचारमा खटिँदा अस्पतालका २ सय ५७ जनामध्ये चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी गरी ४८ जना संक्रमित भए, सबै निको भए । अस्पतालकै प्रयोगशालामा ५६ हजार पीसीआर परीक्षण गरियो, जसमध्ये आठ हजार जनामा संक्रमण पुष्टि भयो । एक हजार एक सय जना यही अस्पतालमा उपचार गरेर निको भए । ५० जनाले उपचारको क्रममा ज्यान गुमाए । संक्रमित भएका ७ सय जनालाई आईसीयू कक्षमा राखेर उपचार गरियो ।
निर्देशक डा. सागरकुमार राजभण्डारीलाई कोभिड–१९ संक्रमण अस्पताललाई सिँगार्ने र सुविधासम्पन्न बनाउने अवसर बनेर आएजस्तो लाग्छ । पछिल्ला ८ दशकमा २२ जना निर्देशक फेरिँदा पनि कुनै परिवर्तन नआएको अस्पतालमा महामारीकै कारण आमूल परिवर्तन आएको छ । महामारीअघि यहाँ सरुवा रोगका बिरामी राख्ने आइसोलेसन कक्ष थिएन । विशेषज्ञ र प्रविधि हुँदाहुँदै पनि सर्वसाधारणको आकर्षणको केन्द्र बन्न सकेको थिएन । संक्रमित भर्ना गर्ने देशकै पहिलो कोरोना अस्पतालका रूपमा विकास गर्दा पछिल्लो एकवर्षे अवधिमा यहाँ थुप्रै परिवर्तन भएको देख्न सकिन्छ । आइसोलेसन नै नभएको ठाउँमा ५५ बेडको सुविधासम्पन्न आइसोलेसन कक्ष बनेको छ । बेडमै अक्सिजन लिन मिल्ने, सीसीटीभीबाट बिरामी मोनिटर गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
‘३० वर्षे चिकित्सा अभ्यासमा मैले १५ अस्पतालमा प्रमुख बनेर काम गरें तर संस्थालाई यसरी नयाँ स्वरूप दिन सक्ने गरी कहिल्यै काम गर्ने अवसर र वातावरण पाएको थिइनँ,’ डा. राजभण्डारीले भने, ‘महामारी मेरा लागि काम गरेर देखाउने विशेष अवसर बन्यो, खुसी लाग्छ ।’ कुकुरले टोकेका, छाला रोगका कारण घाउ भएका बिरामीलाई शल्यक्रियाका लागि अन्य अस्पताल रिफर गर्नुपर्ने, दुईवटा भेन्टिलेटरमा चलेको यो अस्पतालमा अहिले १० वटा भेन्टिलेटर छन् ।
जटिल बिरामी राख्न २० बेडको विशेष आईसीयू कक्ष बनिसकेका छन् । अस्पतालककै प्रांगणमा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण भइसकेको छ । एक वर्ष समय खर्चिएर तयार पारिएको अस्पतालको स्वरूप र सुविधा महँगा निजी अस्पतालभन्दा कम देखिँदैन । धाराबाट आउने धमिलो पानी सङ्लो बनाउन ‘वाटरप्लान्ट’, संक्रमितका लुगा धुन ‘वासिङ मेसिन’, अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापन गर्न ‘अटोक्लेभ मेसिन’ पनि महामारीकै कारण थपिएका हुन् । ‘संक्रमितका लुगा अस्पतालबाहिर लैजाँदा समुदायमा संक्रमण फैलिने अत्यधिक जोखिम थियो, अब त्यो समस्या रहेन,’ डा. राजभण्डारीले भने, ‘अब अर्को जुनसुकै सरुवा रोगको महामारी आए पनि व्यवस्थापन गर्न हामी तयार भएर बसेका छौं ।’
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई देशभरि नमुना परीक्षण गर्नुपर्ने भार भए पनि टेकु अस्पतालमै कोरोना परीक्षण हुन थाल्यो । विशेष प्रयोगशाला बन्यो, जनशक्ति तालिमप्राप्त भए, केही थपिए । डा. राजभण्डारीकै शब्दमा भन्नुपर्दा अब अस्पताल पूरै ‘इन्डिपेन्डेन्ट’ भयो । अब उनको एउटै रहर छ– अस्पताललाई कम्तीमा तीन सय बेडको बनाउन सरकारले जग्गा देओस् । बिरामी हेर्ने संस्थामात्रै नभएर संक्रमणजन्य रोग व्यवस्थापन गर्न विशेषज्ञ उत्पादन गर्ने थलो र एउटा शैक्षिक संस्था र तालिम केन्द्र बनाउन सकियोस् ।
संक्रमण सुरु भएको हल्ला भइरहँदा यहाँका प्रयोगशालाकर्मी यो भाइरस आइहाले पनि केही बिगार नगर्ला भनेर ढुक्क थिए । त्यसैले सरकारले पनि प्रयोगशालाको पूर्वाधार बनाउन तत्कालै पहल गरेन, लगानी गरेन ।
कोभिड–१९ महामारीको रूप लिएर नआएको भए देशकै एक मात्र केन्द्रीयस्तरको प्रयोगशालाको भौतिक पूर्वाधार खडा हुन दशकौं लाग्ने थियो जस्तो लाग्छ निर्देशक डा. रुना झालाई । ‘हामी स्वास्थ्यकर्मीका लागि महामारी ठूलै लडाइँ थियो र यो युद्धमा उत्रेर काम गर्नका लागि हामीसँग सेना भए पनि बलिया हतियार रैनछन् भन्ने महसुस भयो,’ उनले भनिन्, ‘ढिलै भए पनि यो एउटा सिकाइलाई हामीले सदुपयोग गर्‍यौं र अब हामीसँग जे पूर्वाधार निर्माण भएको छ, त्यसले यत्तिकै अर्को महामारी आइहाल्यो भने सजिलै थेग्न सकिन्छ ।’
नेपालमा कोरोना संक्रमणको पहिलो शंकास्पद स्वाब निकाल्दा यहाँका प्रयोगशालाकर्मी त्रसित थिएनन्, रोगको जटिलताबारे वैज्ञानिक हिसाबले धेरै तथ्य आइनसकेकाले पनि उनीहरू स्वाब निकाल्न हिच्किचाएनन् । यतिसम्म कि शंकास्पद व्यक्तिको घाँटीबाट स्वाब निकाल्दा आधारभूत सुरक्षासमेत अपनाइएको थिएन । मास्कमात्रै लगाएर प्रयोगशालाका डा. रञ्जित झाले ती शंकास्पद व्यक्तिको स्वाब संकलन गरेका थिए र शंकास्पद स्वाबको रिपोर्ट पोजिटिभ आए पनि उनलाई संक्रमण सरेको थिएन ।
अस्पतालमा स्वाब परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला भए पनि रिएजेन्ट केमिकल थिएन । ‘सुरुमा हामीले संस्थाहरूको सहयोगमा रिएजेन्ट लिएर स्वाब परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था थियो,’ डा.झाले भनिन्, ‘पछि व्यावसायिक रूपमै केमिकल खरिद गरेर नमुना परीक्षण गर्न थाल्यौं ।’ कोभिड संक्रमणले तीव्र रूप लिन थालेपछि प्रयोगशालामा हुँदै आएका एचआईभीलगायत अन्य सरुवा रोगको परीक्षण बन्द गरिए । यहाँ भएका सबै प्रयोगशाला कोठा र प्रयोगशालाकर्मी कोरोना परीक्षणकै लागि प्रयोग हुन थाले । परीक्षणका लागि ल्याइएका नमुना संकलनलाई सुरक्षित राख्ने नेगेटिभ प्रेसर रुम र कोल्ड रुम निर्माण भयो ।
पहिलो कोरोना परीक्षणका लागि विदेशी प्रयोगशालामा भर परेको यो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट पछिल्लो एक वर्षमा करिब दुई लाख नमुना परीक्षण भए । अब कुनै यस्तै खाले सरुवा रोगजन्य महामारी आए, कुनै संस्था या विदेशी प्रयोगशालाको भर पर्नुपर्ने अवस्था छैन ।
प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७७ १३:०८